Ambohitsaina – Craam : hetsiketsehana ny tontolon’ny kolontsaina | NewsMada
Ambohitsaina – Craam : hetsiketsehana ny tontolon’ny kolontsaina
Tsy toeram-panovozam-pahalalana sy fampitomboana fahaizana fotsiny ny eny amin’ny Oniversite. Toy ny tontolo ifamezivezen’ny karazan’olona samihafa rehetra, misy fihaonana sy fifanakalozana ao, izany hoe, ifamotoan’ny kolontsaina, tsy afa-misaraka amin’ny olombelona. Resy lahatra amin’izany ny fikambanan’ireo mpianatra amin’ny sampana « Médiation et management culturels » (ADMC), izay manana ny foibe fanovozan-kevitra momba ny kanto ankehitriny (Craam).
Noho ny fanampian’ny fandaharanasa Dinika, tohanan’ny Vondrona eoropeanina, nahazo fanampiana mitentina 129 tapitrisa mahery ny fikambanana. Entina, indrindra, manetsiketsika ny tontolon’ny kolontsaina eny amin’ny Oniversiten’Antananarivo izany. Tetikasa mitondra ny anarana hoe « M’Kolosaina ».
Tanjona voalohany ny ahafahan’ny mpianatra miaina izany zavakanto sy ny kolontsaina izany, eny amin’ny toeram-pianarana eny. Tsy ho mpanatrika fotsiny koa anefa izy fa afaka handray anjara mavitrika, izany hoe, hampiroboroboana ny famoronana ara-javakanto sy ara-kolontsaina eo amin’ireo tanora mpianatra. Ankoatra izany, tsy ho manampahaizana fotsiny no tanjona fa tanora mandray andraikitra, eo amin’ny toerana misy azy sy eo amin’ny firenena.
Marobe ny hetsika ao anatin’ny « M’Kolosaina »
Maromaro ireo hetsika tanterahin’ny Craam ao anatin’ny tetikasa « M’Kolosaina ». Natomboka tamin’ity avrily ity ny « Mois thématiques », izany hoe, aompana amin’ny karazan-javakanto iray ny hetsika rehetra mandritra ny iray volana. Mibahan-toerana, ohatra, ny sarimihetsika hatramin’ny faran’ity volana ity. Hampandraisina anjara hatrany ny mpianatra amin’izany, amin’ny alalan’ny fifaninanana atrikasa ary fanehoana talenta.
Hisy ihany koa ny fifaninanana adihevitra, fifaninanana ara-panatanjahantena ary fifaninanana mamorona tetikasa, antsoina hoe “Project cup”. Ireo hetsika samihafa rehetra ireo, hofintinina ao anatin’ny « Festival de la culture universitaire », any amin’ny faramparan’ny taona any.